Dadka degan Garoowe oo muujiyey sida ay u arkaan mooshinka madaxweynaha - Caasimada Online
Home Warar Dadka degan Garoowe oo muujiyey sida ay u arkaan mooshinka madaxweynaha
Dadka degan Garoowe oo muujiyey sida ay u arkaan mooshinka madaxweynaha
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka aan ka heleyno magaalada Garowe ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo mooshinka laga gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya oo uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka.
Banaanbaxa waxaa ka qeyb galay dadweyne aan badneyn, waxaana ay ku dhawaaqayeen inay taageersan yihiin madaxweynaha Soomaaliya, iyaga oo muujiyay sida ay kaga soo horjeedaan mooshinka cusub.
Dadweynaha ayaa ugu baaqay xildhibaanada mooshinka gudbiyay inay ka laabtaan mooshinka oo aysan ka shaqeyn dib ugu laabashada waxyabihii laga soo gudbay.
Dhinaha kale waxaa banaanbax lagu taageerayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, iyadoo dadweyne lamid ah kuwa ku banaanbaxay Magaalada Garowe ay ku kulmeen Baydhabo.
Banaanbaxyo waaweyn ayaa shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dadka banaanbaxayay ay ku taageerayeen madaxweynaha Soomaaliya, iyagoo kasoo horjeeday mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha.
Mooshinka laga gudbiyay madaxweynaha ayaa maraya marxalad adag iyadoo xoghayaha guud ee baarlamaanka uu sheegay inuu buray mooshinkaasi, kadib markii dad badan oo laga been sheegtay ay ka laabteen mooshinka.